Barnaamijyada rasmiga ah ee Google Analytics ee loogu talagalay iPhone iyo Android | Martech Zone
Sarkaalka ayaa Google Analytics iPhone iyo Google Analytics Android barnaamijyada moobiilka ayaa la siidaayay si aad uga heli karto dhammaan shabakadahaaga Google Analytics iyo xogta barnaamijkaaga iPhone-kaaga. Barnaamijka xitaa waxaa ku jira warbixinnada Real Time.
Abku wuxuu hagaajiyaa warbixinnada Google Analytics qaabeynta iyo kontaroolada jawiga guurguura, sidaa darteed waxaad helaysaa waayo-aragnimada ugu fiican iyadoon loo eegin aaladda aad isticmaasho. Tusaale ahaan, abku wuxuu si otomaatig ah u hagaajiyaa shaashadda si uu ugu haboonaado cabbirka shaashaddaada, iyo hagitaanku wuxuu ku saleysan yahay taabashada iyo kabbashada halkii laga isticmaali lahaa teeb garaynta kumbuyuutarka caadiga ah.
Waa kuwan sawirada shaashadda qaar:
Xaddidaadda kaliya ee barnaamijyadu waa qaabeynta iyo dejinta koontada, sida sameynta astaamo ama aragtiyo, tafatirka Yoolalka ama miirayaasha, ku darista isticmaaleyaasha, iyo beddelka rukhsadaha. Tilmaamahaasi waxay u baahan yihiin inaad ku soo gasho Koontadaada Google Analytics adoo adeegsanaya biraawsar kumbuyuutar.
Tags: barnaamijka falanqayntaandroidapp iyo appAnalytics googlegoogle Analytics ee androidgoogle Analytics ee iphonemacruufkamacruufka appiphoneipad app
Mailigen: Email isku dhafan, SMS, iyo Suuqgeynta Bulshada